Smartphone na Kupọns Ọrụ | Martech Zone
Otu ihe anyị na-ahụta mgbe niile na ọ rụ ọrụ mgbe ọ bịara na mkpanaka bụ mma nke izipu ego na ekwentị. Ma ọ bụ ozi ederede nke ụlọ oriri na ọ sentụ sentụ zitere ma ọ bụ ngwa na-egosipụta ego, ekwentị mkpanaaka bụ ụzọ kachasị mma maka mgbapụta coupon. N'ihi gịnị? Ọ bụ naanị teknụzụ nke ndị na-azụ ahịa na-ebu mgbe ha dị njikere ịzụta.
Site na CouponCabin: Site na ọtụtụ ngwa na-edebe ndị nwe ama ama, ndị ọrụ taa etolitela na ngwaọrụ ha. Ma ugbu a, na mgbakwunye na ọtụtụ ihe ama ama emeela, ha nwekwara ike ịchekwaa anyị nnukwu ego. Nke ahụ dị mma, Kupọns agala mkpanaka, ihe dịkwa ka ọkara nke ndị ọrụ ama ama ama amaola ego na ngwaọrụ ha.
Iji mezuo ọchịchọ maka Kupọns ekwentị, CouponCabin na nso nso a malitere ngwa ọhụrụ, nke niile na-enye ndị ọrụ ohere ịnweta Kupọns na ụdị ọ bụla coupon, gụnyere nri nri, nke a na-ebipụta maka iji ụlọ ahịa, na koodu ntanetị maka ọtụtụ narị ndị na-ere ahịa n'ịntanetị .
Tags: couponKupọnsMobile na Mbadamba ụrọsmartphone
Jul 2, 2012 na 11: 57 AM
Naanị ihe esemokwu na Kupọns bụ… ha nwekwara ike ime ka ị ghara ire ere. Igbe dere na nlele ga-akpali onye ọrụ ịchọ kupọns ịntanetị iji chekwaa karịa. Ọ bụrụ na ha chọta otu one ida ego na ire ere ị ga - enweta ego zuru ezu maka. Ọ bụrụ na ha emeghị, o nwere ike ime ka ha kwụsị ịzụ ihe.